किन छाडे एकाएक एसपी दान बहादुर मल्लले चितवन ? — SuchanaKendra.Com
किन छाडे एकाएक एसपी दान बहादुर मल्लले चितवन ?
काठमाडौं । सरुवा भएको दुई हप्तासम्म जिल्ला नछोडेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)दान बहादुर मल्लले चितवन छोडेका छन् । मल्लले शुक्रबार रवाना बुझेको प्रदेश–३ प्रहरी कार्यालयका डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतले पुष्टि गर्नुभएको छ । डिआइजी बस्नेतका अनुसार रमाना बुझेको विषयमा मौखिक जानकारी आइसके पनि लिखित जानकारी आएको छैन ।
एसपी मल्लले आज डिएसपीलाई चार्ज बुझाएर दरबन्दीको लागि रवाना लिएको जानकारी दिइएको छ । मल्ल आज नै काठमाडौं आउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । सरुवा भएको लामो समयसम्म जिल्ला नछाड्ने अडानमा रहेका मल्लको चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।
मल्लले आफूले तत्कालै चितवन नछाड्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई समेत बताएका थिए । मल्ललाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुस ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । अब चितवनमा एसपी मल्लको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी गंगा पन्तलाई पठाएको छ ।